SAWIRRO: Madaxweynaha SOMALIA oo codsi hordhigay baarlamaanka Japan - Caasimada Online
Home Warar SAWIRRO: Madaxweynaha SOMALIA oo codsi hordhigay baarlamaanka Japan
SAWIRRO: Madaxweynaha SOMALIA oo codsi hordhigay baarlamaanka Japan
Tokyo (Caasimada Online) Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka codsaday baarlamaanka dalka Japan in ay ka qaybqaataan dib u dhiska xarunta baarlamaanka Soomaaliya.
Madaxweynaha iyo wafdi uu hoggaaminaayo oo ku sugan Japan ayaa maanta oo Khamii ah booqday xarunta Aqalka Sare ee Baarlmaanka Dalka Japan isla-markaana kulan la-qaatay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka Japan Mr Masaaki Yamasaki iyo ku xigeenkiisa Mr Azuma Koshishu.
Gudoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlmaanka dalkan Japan ayaa ku ammaanay Dowladda Soomaaliya tallaaboyinkii ay qaaday labaddii Sanno ee la soo dhaafay islamarkaana ballan qaaday in Dowladda Soomaaliya ay ka caawin doonaan dhisidda Aqalka sare ee Golaha Shacabka Soomaaliya.
Madaweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga warbixiyey xaaladda Soomaaliya kana dalbaday inay caawiyaan Baarlmaanlka Soomaaliya “ Baarlmaanka Soomaaliya howlo xoog leh oo dar-darteeda leh ayuu ku tallaabsada. waxaannu ka dalbanay Baarlmaanka Japan inay naga caawiyaan dhisidda Aqalka Sare ee Baarlamaanka” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.